သိန်းရာကျော်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ် ကောက်ရတာကို ပိုင်ရှင်အား ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးက taxi ယာဉ်မောင်း ကိုကျော်စီ – Wun Yan
22 ရက်7လ 2019 ညပိုင်းမှာမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တံတားဦးလေဆိပ်ကြီးမှာ ဧည့်သည်လာကြိုတဲ့ကားတစ်စီးမှ သိန်းရာကျော်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ပြုတ်ကျနေတာကို မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ win လေဆိပ် taxiဂိတ်မှာကားပြေးဆွဲနေသော ….
ယာဉ်မောင်းကိုကျော်စီမှကောက်ရကာ သက်ဆိုင်ရာwin လေဆိပ်ဂိတ်မှုးအားသွားအပ်ကာ ဂိတ်မှုးမှလဲသက်ဆိုင်ရာတာဝန်မှုးရုံးခန်းအား ထိုအိတ်အားသွားအပ်စဉ် အိတ်ကျရစ်သူများမှပြန်လည်လာရှာစဉ် တွေ့ပီးအိတ်အားပြန်လည်စစ်ဆေးပီးတော့ ….
မှန်ကန်ကြောင်းပြောပြပီး ကောက်ရသူ ကိုကျော်စီwin တက်စီကားသမားအားရိုးသားမှုကို အသိအမှတ်ပြုပီး ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ငွေသားဆယ်သိန်းချီးမြှင့်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
အင်္ကျီအဖြူ နဲ့လူက အိတ်ကောက်ရသူ ကားသမား ကိုကျော်စီပါ….။
သိနျးရာကြျောပါတဲ့ အိတျတဈအိတျ ကောကျရတာကို ပိုငျရှငျအား ပွနျလညျပေးအပျခဲ့တဲ့ မန်တလေးက taxi ယာဉျမောငျး ကိုကြျောစီ
22 ရကျ7လ 2019 ညပိုငျးမှာမန်တလေးအပွညျပွညျဆိုငျရာ တံတားဦးလဆေိပျကွီးမှာ ဧညျ့သညျလာကွိုတဲ့ကားတဈစီးမှ သိနျးရာကြျောပါတဲ့ အိတျတဈအိတျပွုတျကနြတောကို မန်တလေးအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျမှာ win လဆေိပျ taxiဂိတျမှာကားပွေးဆှဲနသေော ….
ယာဉျမောငျးကိုကြျောစီမှကောကျရကာ သကျဆိုငျရာwin လဆေိပျဂိတျမှုးအားသှားအပျကာ ဂိတျမှုးမှလဲသကျဆိုငျရာတာဝနျမှုးရုံးခနျးအား ထိုအိတျအားသှားအပျစဉျ အိတျကရြဈသူမြားမှပွနျလညျလာရှာစဉျ တှပေီ့းအိတျအားပွနျလညျစဈဆေးပီးတော့ ….
မှနျကနျကွောငျးပွောပွပီး ကောကျရသူ ကိုကြျောစီwin တကျစီကားသမားအားရိုးသားမှုကို အသိအမှတျပွုပီး ကြေးဇူးဆပျတဲ့အနနေဲ့ ငှသေားဆယျသိနျးခြီးမွှငျ့သှားကွောငျးသိရှိရပါတယျ။
အင်ျကြီအဖွူ နဲ့လူက အိတျကောကျရသူ ကားသမား ကိုကြျောစီပါ….။